Madaxwaynihii Catalonia oo Nin Kale Madaxtinimada Dalka Usharaxay. | ogaden24
Madaxwaynihii Catalonia oo Nin Kale Madaxtinimada Dalka Usharaxay.
Hoggaamiyihii hore ee Gobolka Catalonia Carlos Puigdemont ayaa soo magacaabay nin siyaasadda ku cusub oo u tartami doono doorashada madaxtinimo ee Gobolkaasi.
Muuqaal uu shaaca ka qaaday ninkan dibad jooga ah ayaa magaalada Berlin ka sheegay in Quim Torra uu yahay musharax madaxtinimo. Torra ayaa xildhibaanadii ka tirsanaa xisbigii madaxbanaani doonka ahaa ee Catalonia.
Dowladda Spain ayaa sanadkii 2017-kii sharci darro ku tilmaantay aftidii uu Gobolka Catalonia ugu codeeyay in ay ka go’aan Spain inteeda kale. Kaddib markii xukunka deg deg ah lagu soo rogay Gobolkaasi, Puigdemont iyo xubna sare oo ka tirsanaa dawladdiisa ayaa qaarkood xabsiga loo taxaabay halka kuwo kalana ay dalka ka carareen.
Doorasho ayaa ka dhacday gobolkaasi bishii Dicembar sanadkii 2017-kii, xisbiga uu hoggaamiyo Carlos ayaa si dirqi ah ugu guulaystay doorashadaasi. Illa iyo hadda, musharraxiinta ay soo xuleen axsaabta gobolka Catalonia ma tegi karaan goobaha doorshada, waxaana lagu eedeeyay dambiyo mucaaradnimo iyo inay ku lug lahaayeen aftidii bishii Oktoobar halkaasi ka dhacday. Torra ayaa agaasime ka ahaan jiray shirkad caymis ah ka hor inta uusan kusoo biirin siyaasadda.